Weeraryahan ka tirsan Arsenal oo maamulka kooxda ugu gooddiyey inuu tagayo haddii uu yimaado Wilfried Zaha – Gool FM
Weeraryahan ka tirsan Arsenal oo maamulka kooxda ugu gooddiyey inuu tagayo haddii uu yimaado Wilfried Zaha
Haaruun July 21, 2019
(London) 21 Luulyo 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Arsenal ee Alex Iwobi ayaa la soo warinayaa inuu maamulka kooxdaasi ugu gooddiyey inuu tagayo, haddii uu yimaado Wilfried Zaha.
Iwobi ayaa u muuqda mid ka tagi doona garoonka Emirates haddii ay Gunners dhammaystiro saxiixa Wilfried Zaha ka hor bilaabashada xilli ciyaareedka ee 2019-20.
Zaha ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu u dhaqaaqi doono kooxda macallin Unai Emery suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan, weeraryahankan ayaa u sheegay inuu doonayo inuu ku biiro kooxda ka dhisan England.
Iwobi ayaa laga yaabaa inuu helayo daqiiqado xaddidan haddii xiddiga reer Ivory Coast uu u soo dhaqaaqo garoonka Emirates, 23-sano jirkaan ayaana uga digay Arsenal inay raadineyso inuu baxo.
“Ma’ahan mid ka mid ah in aan dib u jiido, waxaan ku guuleystay sanado badan, billowgii waxaa la ii sheegay inaanan fiicnayn, sidaa darteed mar kasta oo ay fursaddu timaado waxaan mar walba isku dayaa inaan is-caddeeyo, laakiin waa ay adag tahay haddii uu yimaado Zaha.” Iwobi ayaa sidaas u sheegay Wargeyska The Sun.
“Waxaan ku jiraa dagaal, laakiin wakhtiga kaliya ee aan ka fekerayo inaan baxo waa inaanan u ciyaari karin sida ugu badan ee aan jeclahay, sida iska cad farxaddayda waa inaan ciyaaro kubadda cagta mana ahan kaliya inaan fadhiyo, haddii ay timaaddo inaan haysan wax doorasho ah waa inaan tago.”
Iwobi ayaa dhaliyey lix gool 51 kulan oo uu u saftay kooxda Gunners intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii dhammaaday ee 2018-19, halka uu kaliya sameeyey hal shuut oo bartilmaameed toos ah 150 kulan oo uu ciyaaray kooxda ka dhisan caasimadda tartammada oo dhan.
Kooxda Barcelona oo hoos u dhigtay fursad ay kula saxiixan kartay mid ka mid ah xiddigaha ka ciyaara Premier League
Halkee ayey ku dambeeyeen taageerayaashii Algeria oo todobada kun ahaa ee ka qeyb galay final-kii koobka qarammada qaaradda Afrika 2019?